Bit By Bit - Unxulumano - 6.7.1 I-IRB yi umgangatho, kungekhona isilingi
abaphandi abaninzi kubonakala ukuba ayazi eziphikisanayo-IRB. Kwelinye icala, xa siqwalasela IRB ukuba kukhal bumbling. Noko ke, ngelo xesha, nabo ingqalelo IRB ukuba umlamli lokugqibela izigqibo yokuziphatha. Oko kukuthi, abo bacinga ukuba xa IRB iyasivumela, ngoko kufuneka ILUNGILE. Ukuba sithi sizivume iintsilelo asilumkanga IRBs njengoko zikhoyo-kwaye kukho ezininzi kuwo (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) ngokuqinisekileyo thina nabaphandi kufuneka bathathe kwi olongezelelweyo uxanduva zokuziphatha yophando lwethu. The IRB yi umgangatho hayi isilingi, yaye le nto kuneempembelelo ezimbini eziphambili.
Okokuqala, IRB yi phantsi kuthetha ukuba xa sisebenza kwiziko ukuba ufuna kwakhona IRB, ngoko kufuneka ulandele le mithetho. Oku kunokubonakala kucacile, kodwa ndiye ndaphawula ukuba abanye abantu bacinga ukuba ufuna ukuphepha IRB. Enyanisweni, ukuba basebenza kwiindawo yokuziphatha ukutshabalala, le IRB inokuba into eluncedo. Ukuba ulandela imithetho yabo, kufuneka beme ngasemva kufuneka into engalunganaga yophando lwakho (King and Sands 2015) . Ke, ukuba anithanga ukulandela imithetho yabo, onokufumana ukuba kuzihlalela kwimeko enzima kakhulu.
Okwesibini, IRB akukho isilingi kuthetha ukuba ngokuzalisa nje iifomu zakho yaye ulandela imithetho akwanelanga. Kwiimeko ezininzi njengoko umphandi ke lowo uyayazi eyona malunga ukwenza ngendlela echanekileyo. Ekugqibeleni, wena unguye Umphandi kunye noxanduva ezisesikweni ubuxoki nani; ngayo igama lakho ephepheni.
Enye indlela yokuqinisekisa ukuba okunyanga IRB njenge umgangatho hayi Isilingi idibanise nesihlomelo yokuziphatha amaphepha akho. Enyanisweni, ukuba bayile isihlomelo yakho yokuziphatha phambi ukufunda bakho iqala ukuze ukunyanzela ngokwakho lokucinga uya kuchaza indlela umsebenzi wakho ukuba oontanga bakho kunye noluntu. Ukuba uzufumana ungakhululekanga ngexesha ubhala isihlomelo yakho, ngoko ukufunda kwakho kungangi kumbetha eseleyo ezisesikweni ezifanelekileyo. Ukongezelela ngokukunceda ukuxilonga umsebenzi wakho, epapasha njengezihlomelo yakho yokuziphatha kuya kukunceda uluntu uphando baxoxe ngemiba ezisesikweni kunye nokuseka imigaqo efanelekileyo ngokusekelwe imizekelo kuphando lenene reseach. Uluhlu 6.3 langoku amaphepha ophando reseach ukuba nicinga ukuba iingxoxo ezilungileyo zokuphatha uphando. Ndingavumiyo ngazo zonke ibango ngababhali kwezi ngxoxo, kodwa zonke imizekelo abaphandi ukwenza ngobulungisa ngengqiqo elizibonakalisa Carter (1996) : kwimeko nganye, abaphandi (1) isigqibo oko ucinga ukuba kulungile yaye yintoni ephosakeleyo; (2) bona basebenza ngokusekelwe koko baye bagqiba bona, ngeendleko zomntu; kunye (3) abonisa esidlangalaleni ukuba benza ngokusekelwe kuhlalutyo yabo yokuziphatha le meko.
Itheyibhile 6.3: Amaphepha kunye neengxoxo umdla ziinqobo yophando lwabo.
Rijt et al. (2014) imifuniselo entsimini ngaphandle kwemvume
ukuphepha umonakalo ekusetyenzwa phantsi
Paluck and Green (2009) eksperimenti endle kwilizwe ekuphuhliseni
imiba imvume ezintsonkothileyo
tenxileyo ye eyingozi ezinokwenzeka
Burnett and Feamster (2015) uphando ngaphandle kwemvume
balancing iingozi kunye neenzuzo xa iingozi kunzima ukuba ubungakanani
Chaabane et al. (2014) nefuthe kwezentlalo uphando
usebenzisa iifayile data avuza
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) imifuniselo entsimini ngaphandle kwemvume
Soeller et al. (2016) ngokwemiqathango anyhashwe yenkonzo